Banyere Anyị - Wuwei Hailun New Material Technology Co., Ltd.
Banyere Wuwei Hailun
Wuwei Hailun New Material Technology Co., Ltd. hiwere na Eprel 2013. Ọ bụ mmepụta isi nyekwara Jiashan Hailun Fine Chemical Plant. Emi odude ke Tumen Industrial Mpaghara nke Gulang County na Gansu Province, e nwere elu ala ebe na mma mma, na Hexi Corridor, tengger desert dị nso. Ọ bụ ebe nkwukọrịta nke Silk Road.
Ngwaahịa anyị bụ aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidinium sulphate, Aminoguanidine Hydrochloride na kemịkal ndị ọzọ dị mma, bụ ndị dị mkpa dị mkpa na agba, ọgwụ, pesticide, mmiri mmiri na mmanụ na-esi isi. Ugbu a, anyị nwere ofu akpan owo nke RMB 10 nde Yuan. Na-ekpuchi mpaghara nke square mita 15,000, ụlọ ọrụ anyị nwere ndị ọrụ 50 ugbu a.
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ anyị na-ewebata usoro dị elu na akụrụngwa iji mepụta nrụpụta. Anyị na-arụ ọrụ mmepụta nnọọ dị ka ISO9000 usoro ọkọlọtọ. Ka ọ dị ugbu a, enwere usoro nnwale zuru oke iji mee ka ndị ahịa buru ibu nwee ngwaahịa dị elu. Anyị ngwaahịa e exported ka Southeast Asia, Europe na America.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ ọkachamara na-emepụta kemịkal na ogige mmepụta ihe nke Tumen Town, Gulang County, Gansu Province.
Anyị echiche bụ: mgbanwe gị ntụkwasị obi na nkwado na ọrụ na ezi obi, ibe uru, ike mmeri-mmeri ọnụ.
Banyere Jiaxing Dongliang
Jiaxing Dongliang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. bụ alaka ụlọ ọrụ anyị, e guzobere na 2013. Ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ndị si mba ọzọ na-etinye aka na mbubata na mbupụ ahịa. Ọ na-ebuputa ahia nke ụlọ na nke mba ọzọ, njikọta njikọ mba ofesi Sino, mmekorita nkwado, azụmaahịa entrepot na azụmaahịa ndị ọzọ.
Tumadi na-etinye na mbubata na mbupụ nke ngwaahịa kemịkal dị iche iche, resins plastik, dyes and auxiliaries, pigments and intermediates, roba ngwaahịa, ngwaike na ngwa eletriki, ọfịs ọfịs, agịga textiles, ụlọ ihe, electronic ngwaahịa, uwe, akpụkpọ ụkwụ na okpu na ngwaahịa ndị ọzọ.